WAR DEG DEG AH: Ergayga QM ee arrimaha Somalia oo si deg deg ah ku gaaray Hargeysa, lana kulmay M/weyne Biixi, Maxaase kasoo baxay? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL WAR DEG DEG AH: Ergayga QM ee arrimaha Somalia oo si deg deg ah ku gaaray Hargeysa, lana kulmay M/weyne Biixi, Maxaase kasoo baxay? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha WAR DEG DEG AH: Ergayga QM ee arrimaha Somalia oo si deg deg ah ku gaaray Hargeysa, lana kulmay M/weyne Biixi, Maxaase kasoo baxay?
WAR DEG DEG AH: Ergayga QM ee arrimaha Somalia oo si deg deg ah ku gaaray Hargeysa, lana kulmay M/weyne Biixi, Maxaase kasoo baxay?
HARGEYSA(P-TIMES)- Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee Somaliland, isagoo halkaas kula kulmay Madaxda Somaliland oo ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay deegaanada barriga gobalada maamulkaas, si gaar ahna duulaankii ay ku qaadeen Xaduuda ay la wadagaan Puntland.
Inkastoo aan shirka Jaraa’id ee ay wada qabtee Somaliland iyo Ergayga aan lagu soo qaadin qadiyadan, haddana wararka hoose ayaa sheegaya in ay Somaliland sheegtay in ay joogaan ciidamadeedu Xaduuda Soomaliland, ayna wali u dhiman yihiin deegaano kale.
Somaliland ayaa ku eedeysay Puntland iyo dawladda Faderaalka in ay keenen gudaha Somaliland ciidamo iyo faragalin siyaasadeed oo ay ku sifeeyeen mid ka soo horjeeda daganaanshaha mandiqada.
Ergayga gaarka ah ayaa ka codsaday Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi in gabi ahaanba la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ciidan, lagana hortago ficilada keenaya dagaalo cusub.
Wararku waxay sheegayaan in aysan wax laysku afgartay, gaar ahaana arrimaha la xariira dagaalada ka socda gobalka Sool, oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, taas oo gaartay heerkii ugu sareeyey.
Wakiilada caalamiga ah iyo Wadamada jaarka la ah Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii loo qaboojin lahaa xiisadan, balse rajada laga qabi karo in laga maarmo dagaalo dhaca ayaa sii yaranaaya sidda ay cadeynayaan goobjoogayaashu.
Somaliland ayaa weerar kuqaaday deegaanka Tukaraq oo xarun u ahayd Puntland, waxayna kala wareegeen ciidamo halkaas joogay, taas oo kordhisay xiisada labada maamul u dhaxaysa.